misy casino akaikin'ny pryor oklahoma
telo andro fahasoavana casino rama
telo misesy poker fandresena rdr2
Ny foko mba handresy Massachusetts' fahatelo casino fahazoan-dalana iray hafa sandoka manomboka taorian'ny Massachusetts Lalao ny Vaomiera (MGC) nifidy tamin'ny alakamisy mba hanomezana mpandraharaha KG an-tanàn-dehibe sy ny sampanan-dalana iray vaovao fanitarana ho tanteraka ny fangatahana. Samy mpandraharaha efa nangataka fotoana bebe kokoa rehefa tsy mivory ny teo aloha nanome fanitarana fa nifarana tamin'ny 16 Martsa misy casino akaikin'ny queen creek az. Ny lalao ny vaomiera maharitra ny fe-potoana farany ho May 4, manome ny orinasa fito herinandro kokoa ny mahazo ny tolo-kevitra mba misy casino akaikin'ny pryor oklahoma. Ny roa, KG an-tanàn-dehibe dia bebe kokoa miaraka amin'ny fanatanterahana ny fampiharana araka ny fiarovana ny maro be ny fiaraha-monina fifanarahana Vaovao Bedford Ben'ny tanàna Jaona Mitchell. Ampahany izay fifanarahana dia ahitana ny fandoavana ny tanàna $12.5 m isan-taona sy ny 4.5 tapitrisa dolara upfront raha ny casino no naorina. KG an-tanàn-dehibe dia tsy mbola manana famatsiam-bola loharanom-baovao mba hampisehoana amin'ny MGC fa dia manantena fa, miaraka amin'ny miaramila fifanarahana antoka, ny mpamatsy vola dia izao tonga nirohotra tany.
Ny teny an-vondrona tarihin'ny developer sampanan-dalana ihany koa ny tsy misy mpampiasa vola ary dia mbola hanao sonia ny tanàna fifanarahana telo andro fahasoavana casino rama. Ny MGC ny fanapahan-kevitra ny hanitatra ny fe-potoana, indray, dia tsy nifanara, squeaking avy amin'ny 3-2-bato telo borderlands marika slot machine.
Na dia izany aza, KG an-tanàn-dehibe sy ny sampanan-dàlana, dia manana ny iray hafa fito herinandro mba hahazo ny ganagana ao amin'ny laharana telo misesy poker fandresena rdr2. Inona no ataony ny amin'ny izay fotoana izay dia ho tsara àry ny fomba ratsy na tena te ity casino fahazoan-dalana 888 casino bonus wagering fepetra.